Mkpụrụ Mkpụrụ PVC Mkpụrụ Na-atụgharị Ọkụ Nkpụrụ Osisi China Manufacturer
Nkọwa:Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ,Okpokoro Okpokoro Osisi,Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ > Mkpụrụ Mkpụrụ PVC Mkpụrụ Na-atụgharị Ọkụ Nkpụrụ Osisi
Ihe Nlereanya.: XHC-FO37
Mkpụrụ Malite Hydrofarm okpomọkụ mats bụ zuru okè maka ndị na-eto eto na ndị na-eto eto, na ụmụaka. Ha na-eme ka germination site na ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ ebe elu karịa ambient okpomọkụ. Site n'ịmalite mgbọrọgwụ, ị na-eme ka ọganihu gị na-eto eto na-eto eto!
Mmiri dị ala bụ otu ụzọ kachasị dị mkpa ma dị irè iji melite germination na nsị. A na-emezi ihe ndị a na-eme ka ọ dịkwuo mma maka ịrụ ọrụ kachasị mma na ọganihu dị ukwuu karị! Ngwongwo ohuru ohuru, nke kpo oku na okpukpu okpukpu okpukpu ala na-enye ndi mmadu ndi ozo ndi ozo na ndi na-achikota ebe obibi.
kpo oku ihe oyiyi nke 200 * 450mm
Ahịa ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'oge oyi Kpọtụrụ ugbu a
Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ Okpokoro Okpokoro Osisi Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ obi na-ekpo ọkụ Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ 20 x 45 Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na kịtịre Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Mkpụrụ Na-ekpo ọkụ Osisi